5 Big Data uye Cloud Chengetedzo zvinonetsa kuti utarise muna 2019 - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
5 Big Data uye Cloud Security zvinetsekana kuti utarise mu2019
Sezvo isu tiri kukura nehunyanzvi, chengetedzo pasina mubvunzo yaizorova nzira yedu. Tichitarisa pamapoinzi emafaro makore anopa, masangano ari kukurumidza kumanikidza masitepisi asina fungidziro inoshamisa yekuchengetedza. Sezvakatarisirwa naGartner, 99% yekutyisidzira kuburikidza ne2020 iyo inogona kuwedzera ichave ichibva kuIIT Enterprises yezvekuchengetedza chete nyaya. Negore rinotevera, zvinogona kunetsa kumafemu madiki kuti ave nechokwadi chekuti data ravo rakachengetedzeka uye rinofungidzirwa kushandiswa kwakasiyana mukuteerera GDPR.
Mabhizinesi ari kufambisa yakanyanya kukosha yavo guru dhata analytics yakatanhamara mitoro kune yeruzhinji makore uye kugadzira yakawanda greenfield kunyorera kune aya mamiriro. Kunyangwe hazvo chiyero chekufambira mberi kwetekinoroji, zvingangoita kuti hapana chiri kufamba nekukurumidza kupfuura iyo Cybersecurity mheremhere. Chokwadi, kunyangwe masangano paakarova njodzi imwe yekuchengetedza, matatu marongero anoita kunge anomuka kuti ave nenzvimbo yawo uye aedze kuzvidzivirira pamatanho ese enzira.
Zvisinei, 2019 iri kutarisira chii maererano nenjodzi yedhijitari? Ngatikurukurei mashanu makuru makuru data uye gore kuchengetedzeka kunetsekana kwegore rino.
1. Rudzikunuro uye IoT
Vanotyora mutemo vari kuramba vachibatsirwa kubva kuwareware - encoding dhata yemunhu uye mushure mezvo vachikumbira rudzikunuro rwekupa kiyi yekunyorera.
Iyo ISF (Ruzivo Rwekuchengetedzwa Foramu - irwo philanthropic sangano rinoongorora uye kuongorora kuchengetedzeka uye nenjodzi manejimendi zvinetsekana) inovimba kuti mukati memakore anotevera, ma cybercriminals vanozoenderera mberi vachiisa pfungwa yavo yekudzikunura mabasa kune akachenjera magajeti ane hukama ne Internet Zvinhu (IoT). MaCybercriminals anogona kubata mamwe maradhi ekubhadhara. Nekudaro, iyo ISF inofungidzira kuti ivo vachazoshandisawo magajeti semapara ekuunza rudzikunuro pane akasiyana masisitimu uye zvishandiso zvese kuburikidza nemasangano.
Kurwiswa kwakadai kunogona kuvhiringidza zviitiko zvebhizinesi nemitsetse yekuzvigadzirira pachayo kunyange zvichikwanisa kuve zvinouraya kana zvikakanganisa zvikamu zvemotokari kana kudyara kwekurapa.
Kuti urwe nenyaya yakabatana nemagadgeti vanofanirwa kushanda nevatengi vavo kuti vaone kusagadzikana kwekuchengetedza uye, kana zvirinani, vimbisa kuti hunhu hwekuchengetedza hunovandudzwa zvichiramba. Masangano ese anodikanwa kusiyanisa mashandisiro avari kushandisa gadget dzakabatana, maitiro avo ekuda kuwedzera mashandisiro gare gare uye kuti mhedzisiro yacho ichave yei kana rimwe gadget richikanganiswa nerudzikunuro.
2. Hondo yepamhepo
Ichokwadi ndechekuti, kurwisa kwedhijitari pakati penyika kunoitika, uye mamiriro e "kupa uye kutora." Ndicho chokwadi chenyika yatiri kugara mairi; aya ndiwo maitiro akanaka anogamuchirwa. Kunyangwe chokwadi chiripo, parizvino, izvo hazvinyatso kumutsa hondo. Zvakadaro, kunyangwe zvese, mumwe munhu anomira kuti awane purofiti.
Nyaya yecyber warfare hombe, iine dzakasiyana siyana dzinowana ruzivo kubva kunharaunda yekutsvaga.
Kunyanya, ivo vari kurwisa vanoita basa, wechitatu-bato bhizinesi, uye masangano emari. Ndicho chikonzero Cybersecurity inonyanya kutsoropodza; panofanirwa kuve nekuziva kuti mumwe munhu anogona kutora dhata rako kuti awane mari. Angave munhu anotora ruzivo rwako kuti awane zvematongerwo enyika zvakare, uye kuwana ruzivo irworwo zvakafanana sekukosha, kubhadhara zvishoma kutarisa kune arikuba.
Kurwiswa kweCyber ​​kunogona kuitiswa nekuda kwezvakawanda, semuenzaniso, kushora, kubata, kuparadza kuburikidza necyber mabhomba uye chitsotsi.
Kurwiswa kweCyber ​​warfare kune mukana wekukuvadza ese marudzi esisitimu anoshanda paInternet kuita nyonganiso munguva pfupi. Pakati pavo pane masisitimu ari zvikamu zvehupenyu hwomunhu wese sekubhanga, kwendege, njanji, zvipatara, masisitimu emvura, uye magetsi magetsi.
Zvese zviri maererano nehurumende 'chengetedzo nerunyararo pamwe nehupenyu hwevanhu, zvakakosha kuti unzwisise zvizere hutsinye hwehuwandu hwekurwiswa uku uye kusiyanisa mhinduro kwayo.
Parizvino, nepo kubiridzira kwenyika kusiri iko kwekunze uye kusimbiswa kwehondo mazuva ano, hakupedze ipapo. Iko kukanganisa-pasi kwekukanganisa kwenyika nyika kubiridzira kuri kunyanya kunetsa, semaitiro akaomarara anoshandiswa nehurumende dzakasiyana, mukufamba kwenguva, vanowana yavo system pasi pekutonga kwevakangwara cybercriminals avo vanowanzo kuve nechido chekurwisa vese vanhu nemasangano.
3. AI-powered kurwiswa
chakagadzirwa Intelligence inogona "kudzidza" - zvine musoro kugadzirisa iyo kodhi yayo kubva ku data rakaunganidzwa pasina kunze kwepurogiramu, saka pane nzvimbo shoma yekukanganisa. Izvo zvakare inoratidzira maitiro ekusimudzira marongero ayo, inodzivirira zviyero zvinotumirwa, zvichiramba, zvichiwana zvishoma nezvishoma zvibereko uye zvine chokwadi.
Asi AI yakawedzera Cybersecurity kurwiswa kuchaumba maitiro edhijitari kune ese mabhizinesi pasi rese. Sezvakaratidzwa naWebroot, ingangoita 87% yeUS Cybersecurity nyanzvi dzinoshandisa AI mune yavo Cybersecurity system. 91% ye Cybersecurity nyanzvi dziri kunetsekana nekushandiswa kweAI mukurwisa kwedhijitari.
Uyewo, Inzwi-inofambiswa nedhijitari vabatsiri vari kufamba mudzimba pamwe nemahofisi - kwese - uye vari kushandura zvese kubva kubhengi kuenda kuchitoro. Nekudaro, sekune chero hunyanzvi hwazvino, ivo zvakare vanoratidzira nyowani njodzi vekita.
Uku kugona kudzora zvishandiso muhofisi kana kumba hazvizoregeredzerwe nema cybercriminals, avo vanozorwisa nenzira yehutsinye kodhi yakagadzirwa kuti iite kwete chete. IoT zvishandiso zvakadaro vabatsiri vedhijitari zvakare vakapihwa rezinesi rakawanda rekutaura kwavari.
Uku kugona kudzora nekutarisa hutachiona IoT zvishandiso, semafoni emafoni, vabatsiri vedhijitari uye ma routers, anogona kuunza vatambi vakaipa mumba.
4. Kuvapo kwemamepera asina kuvimbika
Kana yako hombe data yaunganidzwa, inosangana nekubata kwakafanana. Imwe yemaitiro anoshandiswa pano ndeye MapReduce paradigm. Panguva iyo iyo ruzivo rwunogovaniswa mumavhoriyamu akati wandei, mappa anozvigadzira uye oendesa kune dzimwe nzira dzekuchengetedza. Muchiitiko chekuti wekunze akasvika pane yako mamappers 'kodhi, vanogona kutsiva marongero eazvino mamappers kana kusanganisira' ALIEN 'iwo. Nekudaro, yako yekubata dhata inogona kupatsanurwa zvinobudirira - cybercriminals inogona kuita mappers kuendesa inept zvinyorwa zvemakiyi kana kukosha maseti. Ndicho chikonzero icho mhedzisiro yakakwidziridzwa neReduce maitiro ichave isina kukanganisa. Uye zvakare, vekunze vanogona kuwana mukana kune yakajeka data.
Nyaya iripano ndeyekuti kuwana mukana wakadai kungangodaro kusanetsa zvakanyanya nekuti, kune chikamu chikuru, kufambira mberi kwedata hakupi imwe nhare yekuchengetedza kuchengetedza ruzivo. Ivo vanowanzo, kazhinji, zvinoenderana neparimeter chengetedzo masisitimu. Kana izvi zvikatyoka, dhata rako hombe rinoshanduka kuita chigadzirwa chakadzika.
5. Gore rakasanganiswa
A musanganiswa wegore nharaunda inotakura nayo inovimbisa yekusarudzwa uye kuchinjika, zvichigonesa IT mapiyona kuchengetedza ruzivo mune chero mamiriro anoshanda zvakanyanya kune iwo ruzivo - kubva kune ese ari maviri chengetedzo uye muchinjiko-wekubereka-maonero maonero. Zvakare, iwo mukana wekuchengeta mashoma emhando dzakakosha kana dzakajeka dhata, semuenzaniso, ruzivo runozivikanwa pachako (PII) - pane zvivakwa uchiri kubata kugona kukuru kweveruzhinji neyakavanzika makore kunonetsa kuramba.
Zvakangodaro, zvimwechetezvo nechero shanduko kune bhizinesi system, kuwana iyo yakasanganiswa gore system zvinoreva kutora kutarisa kwezvekuchengetedza mashandiro sezvazvino seti uye nemabatiro avanofanira kujaira.
Panguva iyo painenge yaitwa nemazvo, hwaro hwehybrid hunofanirwa kubatsira kusimudzira chimiro chechengetedzo chekambani. Kunyangwe zvakadaro, chengetedzo inofanirwa kuve iri chikamu chinoonekwa cheako akawandisa masanganiswa egore maitiro, kana iwe unogona kuunza kutyisidzira kutsva usingawani nzira yekuabvisa.
Kuchengetedza uye pakupedzisira kugamuchira mabhenefiti kubva kune yakasanganiswa gore, masangano anofanirwa kuyedza kuita otomatiki zvese pasina kusarudzika kwaanogona, kuita kwete kungoita zvivakwa asi kunyangwe chengetedzo sekodhi zvakare. kushandisa michina tekinoroji ichapa kudzokorora uye kugona kugovera uye kutarisa, izvo zvese zvinozoita kuti zvive nyore kupfuudza mishumo yekuchengetedza.
Unozvigadzirisa sei izvi?
Kunyange Big Data uye gore kadambari inopa zvakawanda zvakanaka zvakanaka, ivowo vanopa mashoma emhando yechengeteko matambudziko. Pasina kupokana makore masystem akachengeteka zvakanyanya iyezvino kupfuura chero nguva yapfuura, uye anoramba akachengeteka zvakanyanya sekuwedzera kwekurerwa.
Chero zvazvingaitika, chengetedzo inzira mbiri-nzira, uye vatengi ve gore kadambari masystem uye Big Data masisitimu ane iwo akaenzana basa rekuita mukuchengetedza kwedata sevatengesi. Nekuita matanho akajeka, semuenzaniso, kugadzira kutaridzika kweAWS yekukanganisa kupora, uye nekutevera yakawanda nhungamiro, senge kuita kwakakodzera, mabhizinesi anogona kuvimbisa kuenderera nekuchengetedzeka kweruzivo rwavo, vasingateerere mashoma masisitimu pariri. kugadzirirwa, kununurwa, nekududzirwa.
Izvo zvinodikanwa kuti uchenjere zvakanyanya nezve cyber-chengetedzo pasangano, zvakare, padanho rega. Makambani anoisa zviwanikwa mukuchengetedza zviyero kudzikisira kutyisidzira kwekutyorwa kwedhata zvirokwazvo ane mhirizhonga.
Nyaya iyi inoda kuitwa nekubatana kwemubatanidzwa wevanhu vakazvimiririra uye weveruzhinji uye nemasangano epasi rose vachishandisa hurongwa hwakasimba hwekupara mhosva dzepa cyber. Mitemo inodzora inofanirwa kuvandudzwa panguva yekusimudzira ruzivo uye dzidzo nezve kuwedzera kutyisidzira kwe cyber. Kuramba uchifunga aya makuru data uye Cloud kuchengetedza mafambiro anogona kuve yakakosha mukana kumasangano kuchengetedza mabhizinesi avo kubva kumacybercriminals.